Ny fifehezana ny fiovam-po Freemium dia midika hoe matotra amin'ny Product Analytics | Martech Zone
Ny fifehezana ny fiovam-po Freemium dia midika hoe matotra amin'ny momba ny Product Analytics
Alatsinainy Aprily 26, 2021 Alatsinainy Aprily 26, 2021 Jeremy Levy
Na Rollercoaster Tycoon na Dropbox no resahinao, tolotra freemium tohizo fomba mahazatra hisarihana ireo mpampiasa vaovao amin'ny vokatra rindrambaiko mpanjifa sy orinasa. Rehefa tafidina an-tsambo mankany amin'ny sehatra malalaka ianao, ny mpampiasa sasany dia hiovaova amin'ny drafitra karama, ary maro hafa kosa no hijanona ao amin'ny ambaratonga maimaim-poana, atiny izay fampiasa azony idirana. Research amin'ny lohahevitry ny fiovam-po freemium sy ny fitazonana ny mpanjifa dia be dia be, ary ny orinasa dia iharan'ny fanamby hatrany mba hanao fanatsarana fanampiny amin'ny fiovam-po freemium. Ireo izay mahazaka valisoa lehibe. Ny fampiasana tsara kokoa ny famakafakana vokatra dia hanampy azy ireo ho tonga any.
Ny fampiasana ny endri-javatra dia milaza ny tantara
Mahagaga ny habetsaky ny angona azo avy amin'ireo mpampiasa rindrambaiko. Ny fisehoana rehetra ampiasaina mandritra ny fotoam-pivoriana rehetra dia milaza zavatra amintsika, ary ny fitambaran'ireo fianarana ireo dia manampy ny ekipan'ny vokatra hahatakatra ny dian'ny mpanjifa tsirairay, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny famakafakana vokatra mifandraika amin'ny ny trano fitehirizan-drakitra rahona. Raha ny marina, ny habetsaky ny angona dia tsy mbola olana. Ny fahazoan'ny ekipa vokatra ny angon-drakitra ary ahafahan'izy ireo mametraka fanontaniana sy manangona hevi-baovao azo ampiharina — tantara hafa izany.
Na dia eo aza ny tsenan'ny mpivarotra mampiasa sehatra fampielezan-kevitra fampielezan-kevitra ary misy ny BI nentim-paharazana hijerena marimaritra marobe manan-tantara, matetika ny ekipan'ny vokatra dia tsy afaka mitrandraka ny angon-drakitra hapetraka (sy mamaly) ireo fanontaniana momba ny dian'ny mpanjifa tadiavin'izy ireo. Inona avy ireo fiasa ampiasaina? Rahoviana no mihena ny fampiasana endri-javatra alohan'ny fialana? Ahoana ny fandraisan'ny mpampiasa ny fiovana amin'ny fisafidianana endri-javatra amin'ny ambaratonga maimaim-poana vs. Miaraka amin'ny famakafakan-kevitra momba ny vokatra, ny ekipa dia afaka mametraka fanontaniana tsara kokoa, manangana fehintsoratra tsara kokoa, manandrana ny valiny ary mampihatra haingana ny fanovana ny vokatra sy ny tondrozotra.
Izany dia mahatonga fahatakarana be pitsiny kokoa momba ny tobin'ny mpampiasa, mamela ny ekipan'ny vokatra hijerena ireo fizarana amin'ny alàlan'ny fampiasana endri-javatra, naharitra hatramin'ny hafiriana no nampiasan'ny mpampiasa ilay rindrambaiko na ny fotoana ampiasain'izy ireo azy, ny lazan'ny besinimaro ary maro hafa. Ohatra, mety ho hitanao fa ny fampiasana fampiasa manokana dia ny fanondroana anarana mihoatra ny index ao amin'ireo mpampiasa amin'ny laharana maimaimpoana. Ka afindrao amin'ny sehatra misy karama ilay fiasa ary refeso ny vokany amin'ny fanavaozana roa ho an'ny ambaratonga karama sy ny tahan'ny fikoropahana maimaimpoana. Fitaovana BI nentim-paharazana irery no ho tonga fohy hamakafaka haingana ny fanovana toy izany
Tranga iray amin'ireo Blues Maimaimpoana
Ny tanjon'ny ambaratonga maimaim-poana dia ny mitondra ny fisedrana izay mitondra any amin'ny fanavaozana farany. Ireo mpampiasa izay tsy manatsara ny drafitra karama dia mijanona ho ivon-karama na miala fotsiny. Samy tsy miteraka fidiram-bola amin'ny famandrihana. Ny fanadihadiana ny vokatra dia mety hisy fiatraikany tsara amin'ireo valiny roa ireo. Ho an'ireo mpampiasa misintaka, ohatra, ny ekipan'ny vokatra dia afaka manombatombana ny fomba nampiasana ny vokatra (midina amin'ny ambaratonga asongadin-javatra) samy hafa eo amin'ireo mpampiasa izay nisintaka haingana vs. ireo izay nanao hetsika sasany nandritra ny fotoana iray.
Mba hialana amin'ny fivoahana haingana, ny mpampiasa dia mila mahita sanda avy hatrany amin'ny vokatra, na dia amin'ny ambaratonga maimaim-poana aza. Raha tsy ampiasaina ny endri-javatra, dia mety ho fambara fa avo loatra ho an'ny mpampiasa sasany ny fiankinan-doha amin'ny fitaovana, mampihena ny vintana hiova ho ambaratonga voaloa. Ny famakafakana ny vokatra dia afaka manampy ny ekipa handinika ny fampiasana endri-javatra ary hamorona traikefa vokatra tsara kokoa izay mety hitarika any amin'ny fiovam-po.
Raha tsy misy ny analytics momba ny vokatra dia ho sarotra (raha tsy azo atao) ny mahatakatra ny ekipan'ny vokatra ny antony mahatonga ny mpampiasa hiala. Ny BI nentim-paharazana dia tsy hilaza amin'izy ireo betsaka noho ny isan'ny mpampiasa nandao azy ireo, ary azo antoka fa tsy hanazava ny fomba sy ny antony ny zava-mitranga ao ambadiky ny seho izany.
Ireo mpampiasa izay mijanona amin'ny laharana maimaim-poana ary manohy mampiasa endri-javatra voafetra dia manome fanamby hafa. Mazava fa miaina ny lanjan'ny vokatra ny mpampiasa. Ny fanontaniana dia ny fomba fampiasana ny fifandraisana misy azy ireo ary afindra amin'ny ambaratonga misy karama izy ireo. Ao anatin'ity vondrona ity dia afaka manampy ny fizahana vokatra ny fizarana miavaka, manomboka amin'ireo mpampiasa tsy dia matetika (tsy laharam-pahamehana) ka hatramin'ny mpampiasa izay manery ny fetran'ny fidirana malalaka (fizarana tsara hifantohana aloha). Ekipa vokatra iray mety hanandrana ny fihetsik'ireo mpampiasa ireo amin'ny fetrany bebe kokoa amin'ny fidirana malalaka, na mety hanandrana paikady fifandraisana hafa ny ekipa hanasongadinana ny tombotsoan'ny ambaratonga voaloa. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, ny famakafakana ny vokatra dia ahafahan'ny ekipa manaraka ny dian'ny mpanjifa sy mamerina izay miasa manerana ireo mpampiasa misimisy kokoa.
Mitondra lanja mandritra ny dia manontolo ataon'ny mpanjifa
Rehefa nanjary tsara kokoa ho an'ny mpampiasa ny vokatra, dia nanjary miharihary kokoa ny fizarana tsara sy ny personas, manome ny fahitana ho an'ny fampielezan-kevitra izay mety hisarika ny mpanjifa mitovy endrika. Rehefa mampiasa rindrambaiko ny mpanjifa rehefa mandeha ny fotoana, ny mpandinika ny vokatra dia afaka manohy manangona fahalalana avy amin'ny angon-drakitry ny mpampiasa, manao sarintany ny dia nataon'ny mpanjifa hatrany amin'ny fahaverezana. Fahatakarana ny fahalalana ny zavatra mahatonga ny mpanjifa hikorontana — ny fiasa izay nataon'izy ireo sy ny tsy nampiasainy, ny fiovan'ny fampiasana rehefa mandeha ny fotoana.
Rehefa fantatra ny olona mety hampidi-doza dia andramo sao misy fahombiazan'ny fahafaha-manao firosoana amin'ny fitazonana ireo mpampiasa ao anaty sambo ary hitondra azy ireo amin'ny drafi-bola. Amin'izany fomba izany, ny analytics dia eo am-pon'ny fahombiazan'ny vokatra, izay manosika ny fanatsarana endri-javatra izay mitarika mpanjifa maro kokoa, manampy amin'ny fitazonana ny mpanjifa efa ela ary amin'ny fananganana tondrozotra vokatra tsara kokoa ho an'ny mpampiasa rehetra, ankehitriny sy ho avy. Miaraka amin'ny famakafakana vokatra mifandraika amin'ny trano fitehirizan-drakitra rahona, ny ekipa vokatra dia manana fitaovana hanararaotana faran'izay betsaka ny angon-drakitra hametrahana fanontaniana, hamorona fikajiana ary hizaha toetra ny valintenin'ny mpampiasa.
Tags: famandrihana atahoranaraharaham-barotra ny faharanitan-tsainatrano fitehirizan-drakitra cloudMpanjanantanyrindrambaiko orinasaambaratonga maimaim-poanafreemiumfiovam-po freemiumfandoavam-bola karamasaasfamandrihana rindrambaikofamandrihana
Niara-nanorina i Jeremy Levy matoanteny miaraka amin'ny mpisava lalana amin'ny namana sy haino aman-jery sosialy Andrew Weinrich taorian'ny nahitany ny filàna angona data ho an'ny mpanjifa kalitao rehefa mihazakazaka MeetMoi, fampiharana mampiaraka mifototra amin'ny toerana izay amidiny amin'ny Match.com. Nanangana an'i Xtify ihany koa izy mirahalahy, fitaovana fampandrenesana finday amidin'izy ireo tamin'ny IBM.